Amụma Nzuzo | Hebei Chuangqi fitgbọ ala oyiyi akwa Co., Ltd.
1. Anyị ga-eji ozi nkeonwe anakọtara iji mejuputa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị dịka usoro nke Iwu Nzuzo a.
2. Mgbe ị nakọtara ozi nkeonwe gị, anyị ga-achọpụta data site na ụzọ ọrụ aka. Ihe omuma a achoputaghi agaghị amata isiokwu nke onwe onye. Biko ghota ma kweta na n’okwu a anyi nwere ikike iji ihe omuma achoputara; ma na-ekpugheghị ozi nkeonwe gị, anyị nwere ikike inyocha nchekwa data onye ọrụ ma jiri ya mee ihe.
3. Anyị ga-agụta ojiji nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị ma nwee ike ịkekọrịta ọnụ ọgụgụ ndị a na ọha na eze ma ọ bụ ndị ọzọ iji gosipụta usoro ojiji nke ngwaahịa na ọrụ anyị. Agbanyeghị, ọnụọgụ ndị a etinyeghị ozi nke njirimara gị.
4. Mgbe anyị gosipụtara ozi nkeonwe gị, anyị ga-eji ozi gụnyere itinye ọdịnaya na amaghị aha iji belata ozi gị iji kpuchido ozi gị.
5. Mgbe anyị chọrọ iji ozi nkeonwe gị maka ebumnuche ndị ọzọ nke iwu a na-ekpuchighị, ma ọ bụ maka ozi anakọtara site na ebumnuche ndị ọzọ maka ebumnuche ndị ọzọ, anyị ga-ajụ gị maka nnabata gị tupu ebumnuche iji mee nlele.